အခြားရောဂါများ Archives - Page2of 34 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ (Asthma) အကြောင်း သိကောင်းစရာ… Asthma ဆိုတာ ပန်းနာရင်ကြပ် လို့ ခေါ်တဲ့ အဆုတ်ရောဂါတမျိုးပါ ။ ဒီရောဂါက အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းလေးတွေ ရောင်ရမ်းရာကနေ တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းမြောင်းလာပီး အသက်ရှူရခက်ခဲလာရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်အရွယ်တွေမှာဖြစ်တတ်လဲ.??ဒီပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါဟာ အသက်အရွယ်မရွေးမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ် ၊ တချို့လူတွေအတွက် အရမ်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့…
သွေးထွက်လွန်လူနာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့သော် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အရနှစ်စဉ်အမေရိကန်မှာ လူပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ခန့်ဟာသွေးလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်သွေးဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်သေဆုံးလျက်ရှိကြပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုခုကြုံရတာ မတော်တဆမှုတစ်ခုခုကြုံရတာကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကနေတဆင့် သွေးထွက်လွန်တတ်ပါတယ်။သွေးဆုံးရှုံးမှုတိုးလာတာနဲ့အမျှအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးထွက်လွန်လာတဲ့လက္ခဏာများအနေနဲ့ မူးဝေခြင်း၊ ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊မောပန်းခြင်း၊ ပျို့အံခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာသွေးထွက်လွန်နေသူတယောက်တွေ့တဲ့အခါ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းနဲ့ ကာကွယ်ပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်သွေးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထိတ်လန့်မှုမဖြစ်စေဖို့ကိုလည်း စောင့်ရှောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ပထမ…
How can you prevent the seams from opening?
ချုပ်ရိုးတွေ မပွင့်အောင် ဘယ်လိုစနစ်တကျ ဂရုစိုက်မလဲ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ချုပ်ရိုးကွဲတာတွေ အရမ်းများလာကြတယ်၊ ကလေးမွေးပြီး ချုပ်ရိုးကွဲတယ်၊ အနာမကျက်ဘူး၊ အူအတက်ပေါက်ပြီး ချုပ်ရိုးကွဲတယ် အများကြီးပဲ။ ဒါဘာကြောင့်လဲ၊ ချုပ်တာခြင်းအတူတူ တခြားလူကျတော့ အဆင်ပြေပြီး ကိုယ်ကျမှ ဘာလို့ ကွဲရတာလဲ။ အကြောင်းပြချက်တွေကတော့…